Iziphumo zeTekhnoloji: UMartech wenza into echaseneyo neenjongo zayo | Martech Zone
Iziphumo zeTekhnoloji: UMartech wenza into echaseneyo nenjongo yeenjongo zakhe
Lwesine, Okthobha 29, 2020 Lwesine, Okthobha 29, 2020 Shafqat Islam
Kwilizwe apho itekhnoloji yenzelwe ukuba ibe sisantya kunye nokuhambisa isicwangciso esiliqili, itekhnoloji yentengiso ineminyaka edlulileyo, enyanisweni, isenza ngokuchaseneyo ngqo.
Ukujongana nenqwaba yamaqonga, izixhobo, kunye nesoftware onokukhetha kuyo, indawo yentengiso iqinisekisiwe kwaye inzima kunangaphambili, izitokhwe zobuchwephesha ziba nzima nangakumbi ngalo mhla. Jonga nje ngaphandle kweGartner's Magic Quadrants okanye iingxelo zeForrester's Wave; isixa sobuchwepheshe obufumanekayo kwintengiso yanamhlanje asipheli. Amaqela ahlala echitha ixesha lawo esenza umsebenzi malunga nomsebenzi, kwaye imali ekufanele ukuba iya kwimikhankaso ichithwa kwizinto ezingenamsebenzi- kwaye zihlala zisenziwa ngesandla.
Ku kutshanje isifundo, Uphando lukaSirkin luvavanye ngaphezulu kwe-400 yabathengisi bemisebenzi eyahlukeneyo kunye nobukhulu kumzamo wokuqonda ukuba yintoni ebambe umartech. Uphando lubuziwe ngokulula:
Ngaba isisombululo sakho sangoku semartech sisicwangcisi esisebenzayo?
Ngokumangalisayo, ngama-24% kuphela abathengisi abathe ewe. Abaphenduli bophando bacaphule oku kulandelayo ngezizathu:
I-68% ithe isitaki sabo asikwazi ukubanceda balungelelanise izixhobo (abantu kunye nohlahlo-lwabiwo mali) kwisicwangciso
I-53% ithe isitaki sabo senza ukuba kube nzima ukwenza uhlengahlengiso lwentengiso (amaphulo, umxholo, kunye noyilo) kuwo onke amaqela, itekhnoloji, kunye namajelo okuphumeza ngokufanelekileyo
I-48% ithe isitaki sabo asihlangananga kakuhle
Kwaye inefuthe lokwenyani, elibi:
Kuphela ngama-24% athi ingqokelela yabo inceda ukudibanisa kunye nokunika ingxelo ngokusebenza kwephulo kakuhle
Kuphela ngama-23% athi isitaki sabo siyakwazi ukuqhuba ukusebenzisana kuzo zonke izixhobo
Kuphela yi-34% ithi isitaki sabo siyabanceda ukuba benze, balawule, bagcine kwaye babelane ngeeasethi zomxholo kakuhle
Ke, kutheni le nto izisombululo zemartech zangoku zingazifezekisi iimfuno zamaqela entengiso?
Inyani yile yokuba izixhobo zeMartech kudala zenziwe ngokuyintloko njengezisombululo zamanqaku- zihlala zihambelana nomgaqo wentengiso wamva nje okanye "itshaneli yeveki" -ukusombulula iintlungu zodwa, umceli mngeni, okanye ityala. Kwaye ngokuhamba kwexesha, njengoko ezi zixhobo ziguqukile, zinjalo ibhokisi Abathengisi bakhupha ii-RFPs, bavavanya abathengisi, kunye nokuthenga izisombululo zodidi olunye. Imizekelo:
Iqela lethu kufuneka lenze kwaye lipapashe umxholo-sidinga iqonga lokuthengisa umxholo.
Kulungile, ngoku ekubeni sisebenzise inkqubo yethu yokudala, masityale imali kumlawuli wee-asethi zedijithali ukuze sigcine umxholo wethu wokwabelana nokusetyenziswa kwakhona.
Ngelishwa, kwizicelo zobomi bokwenyani, ezi zixhobo ziphela kutyalomali olugqithisileyo, lwamkelwa kancinci, kwaye lwasasazwa bodwa. Izixhobo ezizodwa zithengwa kumaqela akhethekileyo. Izisombululo zihlala kwii-silos, zinqanyuliwe kwinkqubo enkulu, enkulu. Isiqwenga ngasinye sesoftware sineseti yaso yee-admins, iimbaleki kunye nabasebenzisi bamandla, kunye nokuhamba okungafaniyo komsebenzi okwenzelwe ngokukodwa eso sixhobo (kunye neso sixhobo kuphela). Kwaye indlu nganye iseti yayo yedatha.
Okokugqibela, yeyiphi into ebonakalayo ebonakalayo ebubunzima bokusebenza kunye nengxaki yokusebenza kakuhle (ungasathethi ke ngesipikha esibi kwi-TCO yesoftware yakho yeCFO / CMO ngaphezulu). Kufuphi: Abathengisi abakhange baxhotyiswe ngesisombululo esiliqela esigunyazisa iqela labo ukuba lenze uhlengahlengiso lokwenyani.
Ukucwangciswa kwentengiso kufuna ukulahla ingqondo yesikolo esidala. Zihambile iintsuku apho iinkokeli zentengiso kunye namaqela asebenzayo kwintengiso banokwenza izisombululo kunye kunye nokuthandaza, ngandlela thile, zonke iinkqubo zabo ziya kulungelelaniswa ngomlingo. Zihambile iintsuku zokutyala imali kumaqonga elifa ukuze khangela ibhokisi kuphela ukuba iqela labo lingamkeli ngokupheleleyo kwaye lifumane ixabiso kwisixhobo.
Endaweni yoko, amaqela kufuneka athathe umbono opheleleyo wentengiso- kubandakanya isicwangciso, ukwenziwa, ulawulo, ukuhanjiswa, kunye nomlinganiso- kwaye kuvavanywe izisombululo ezincedisa esiphelweni ukuya esiphelweni. orchestration yentengiso. Zeziphi izixhobo ezisetyenziswayo? Bathetha njani omnye komnye? Ngaba bayanceda ukuququzelela kunye nokwenza ukuba ukubonakala kolwazi, ukukhawulezisa iinkqubo, ulawulo lwezixhobo kunye nomlinganiso wedatha?
Ukulungiswa kwezi ngxaki kuya kufuna utshintsho kutshintsho kwintengiso ye-orchestration.
Kuphononongo olukhankanywe apha ngasentla, i-89% yabaphenduliyo bathi i-martech iya kuba sisicwangciso esisebenzayo nge-2025. Itekhnoloji engundoqo edweliswe njengeyona inefuthe elikhulu? Uhlalutyo lokuQikelela, i-AI / ukuFunda koMatshini, ukuSebenzisa okuDlamkileyo kokuYila, kunye… Intengiso yeOrchestration.
Kodwa yintoni ukuthengiswa kweNtengiso?
Ngokungafaniyo nolawulo lweprojeki, ulawulo lomsebenzi, izixhobo zolawulo lwezixhobo, kunye nezinye izisombululo, amaqonga orchestration enzelwe iinjongo ezithile-kunye neenkqubo-zemibutho yentengiso. Nanku umzekelo:
I-orchestration yentengiso yindlela ecwangcisekileyo neqhubekayo, eqonda lonke icandelo lenkqubo kufuneka lisebenze.
Ngokufanelekileyo, ukuthengisa isoftware ye-orchestration iba yiyo ikhaya or inkqubo yokwenza (okt umthombo wenyaniso) kumaqela entengiso- apho wonke umsebenzi wenzeka khona. Kwaye okona kubaluleke kakhulu, isebenza njengezicwili ezinxibelelanayo phakathi kwetekhnoloji yokuthengisa eyahlukileyo, amaqela okuthengisa, kunye nokuhamba komsebenzi-kuququzelela i-orchestration kuyo yonke imiba yocwangciso lwephulo, ukwenziwa kunye nemilinganiselo.
Kungenxa yokuba amaqela entengiso ale mihla afuna itekhnoloji yale mihla yokuthengisa. Isoftware ezisa zonke ezona zixhobo zahlukileyo ngokudibeneyo kwiqonga elinye (okanye, ubuncinci, ngokudityaniswa ngobuchule kunye nobubanzi betekhnoloji) ukulungiselela iinkqubo kunye nokuhanjiswa komxholo kunye nedatha yokwanda kokubonakala, ulawulo ngakumbi , kunye nemilinganiselo engcono.
Wamkelekile ku Wamkelekile…
Wamkelekile kwiQonga lokuThengisa iOrchestration luluhlu lweemodyuli zala maxesha, ezihlanganisiweyo, kunye nezakhelwe injongo ukunceda ukurhweba ngokuthengisa. Inika ukubonakala kokucwangciswa ngobuchule kunye nokulungelelanisa izixhobo, izixhobo zokusebenzisana kunye nokwenza umsebenzi ngokukhawuleza, ulawulo ukugcina ulawulo kuzo zonke izixhobo zokuthengisa, kunye nokuqonda ukulinganisa umsebenzi wakho.
Ewe kunjalo, zonke zixhaswa yi-API eyomeleleyo kunye nendawo yemarike yokudibanisa enamandla enamakhulu ezihlanganisi ezingenakhowudi-isakhelo sokucinga esenzelwe ukubonelela ngokudityaniswa kweqhinga kwisigaba ngasinye senkqubo yentengiso.
Kungenxa yokuba umqhubi ufuna induku yokwenza iimvumi ezininzi zidlale izixhobo ezahlukeneyo, intengiso yeemestro ifuna ukubonakala kunye nolawulo kuzo zonke izixhobo zabo ukulungiselela ukuthengisa.
Funda nzulu malunga nokwamkelwa Cela iDemo yokwamkela
Shafqat Islam ngumsunguli kunye ne-CEO ye Wamkelekile, Uphawu lweNewsCred.
Ukuba awuyazi ukuba yintoni iNqaku leWordPress yomntwana…
GroupSolver: Ukunyusa i-AI kunye ne-NLP kuPhando lweMarike